पहिलो पटक असारमै विनियोजन विधेयक पारित, सरकारलाई रकम खर्च गर्ने बाटो खुला
Posted on Jul 09 2016
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३-७४को बजेट सम्बन्धी विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमाथि व्यवस्थापिका संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि विधेयक पास भएको हो ।..
त्रिभुवन विमानस्थल भित्रै भैंसी छिरेपछि...........
काठमाडौं । काठमाडौंमा आजभोलि छाडा पशुवस्तुको आतंक छ । केही दिन अघि शहीदगेटमा एक राँगोले बबण्डर मच्चाएको घटना सेलाउन नपाउँदै शनिबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भैंसीले बितण्डा मच्चायो । गौशालातर्फको रोडबाट..
​चीनसँग इन्धन ल्याउने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा
काठमाडौँ । आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौताबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ। गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालमा..
​विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शालिग्राम शिला कालिगण्डकीको डुबानमा
पर्वत । बिहीबारदेखि परेको लगातारको वर्षाका कारण विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा परेको छ । पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीका सिमानामा रहेको पर्वतका शालिग्राम गाविसमा रहेको विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला कालीगण्डकीमा..
​धादिङमा १९ जना पहिरोको बीचमा फसे
धादिङ । वर्षासँगै चारैतिरबाट आएको पहिरोका कारण धादिङको दुर्गम रि गाविस–९ चेप्राङमा ६ घरका १९ जना पहिरोको बीचमा फसेका छन् । पहिरोका कारण आसपासका बस्तीसमेत जोखिममा परेको प्रहरीले जनाएको छ । भूकम्पले..
मुस्ताङमा युरेनियम, पेट्रोल र नुनखानी भेटियो
मुस्ताङ । युरेनियम अन्वेषण, पेट्रोलियम पदार्थ र नुनको खानी अध्ययन गर्न मुस्ताङ आएको सरकारी टोलीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा वि सं २०७०-७१ सालमा गरिएको प्रारम्भिक..
​बझाङमा केन्द्र विन्दु भएर आधा घण्टामा चार पटक भूकम्प
बझाङ । बझाङको धमेना गाबिस केन्द्र बिन्दु आधा घण्टामा चार पटक भूकम्प गए पछि स्थानीय वासिन्दामा त्रास फैलिएको छ । बुधबार दिउँसो २ बजेर ५५ मिनेटमा ५ स्केलको, ३ बजेर १२..
​नुन र पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गर्न सरकारी टोली मुस्ताङमा
मुस्ताङ । पेट्रोलियम पदार्थ र नुन खानीको अध्ययन गर्न सरकारी टोली मुस्ताङ पुगेको छ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग र प्राविधिकसहित २२ जनाको..
​काठमाडौं उपत्यकामा १४ ठाउँमा भेटियो मिथेन ग्यास
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले इमाडोलमा रहेको मिथेन ग्यासलाई भन्डारण गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका प्राकृतिक ग्यास तथा कोइला शाखा प्रमुख पृथ्वीलाल श्रेष्ठका अनुसार ग्यास भन्डारण गर्नका लागि विभागले..
​बेलायत इयुबाट अलग हुने लगभग निश्चित
काठमाडौं । बेलायत युरोपियन युनियन (इयु) बाट टुक्रने लगभग पक्का भएको छ। बेलायतमा उक्त विषयमा हिजो सम्पन्न जनमत संग्रहमा इयुबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने पक्षले अग्रता लिएको छ। अहिलेसम्मको मत परिणामअनुसार अलग..
नेपाल आउँदा के ल्याउन पाइन्छ, के ल्याउन पाईदैन ? भन्सारको नियम परिवर्तन
काठमाडौ । साउनपछि विदेशबाट नेपाल फर्किदै हुनुहुन्छ भने काँचो सुन नल्याउनुहोला । सरकारले गहनाबाहेकको ५० ग्रामसम्मको सुन ल्याउन प्रतिवन्ध लगाएको छ । विदेशमा ६ महिना बसेका नेपालीले अहिलेसम्म पचास ग्राम काँचो..
​अब काठमाडौंमा घर बनाउँदा कुन नदीको दायाँबायाँ कति जग्गा छाड्नुपर्छ ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका १४ नदीको बहाब क्षेत्रको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने जग्गाको दूरी सार्वजनिक गरेको छ। वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते र मनोहरामा दायाँबायाँ २० मिटर धोबीखोलामा धोबीखोला आयोजना लागू भएको..
​प्रेमसम्बन्ध टुटेपछि गोली हानी हत्या
डोटी । डोटीको पचनाली गाविस तलकोटमा भएको हत्याको रहस्य प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । करिब १२ दिनको सफल प्रहरी अनुसन्धान पछि सो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो । जिल्ला..
​बञ्चरो हानेर हत्या गरिएको घटनामा डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध उजुरी
झापा । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री धर्मशीला चापागाईंविरुद्ध गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै झापामा उजुरी परेको छ। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजकसमेत रहेका..
​अब संगीतमा पनि ‘नक्कली’, वरिष्ठ संगीत प्रबन्धक शर्माविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरका वरिष्ठ संगीत प्रबन्धक सुदेशराज शर्माले नियुक्ति प्रयोजनका लागि पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली देखिएकाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको..
अफगानिस्तानको काबुलमा आत्मघाती बम हमला हुँदा १२ नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा नेपाली सुरक्षागार्ड सवारी एक गाडीमा आत्मघाती बम आक्रमण हुँदा कम्तिामा पनि १४ जनाको ज्यान गएको छ । सोमबार बिहानै एक मिनी बसलाई निशाना बनाएर गरिएको आत्मघाती..
​एचपी ग्यास पड्किएर ज्यान गएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आपूर्तिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । ललितपुर उपमहानगरपालिका–१९ हौगलमा तामा र पित्तलको पाता जोड्ने क्रममा ज्यान गएकाका पीडितका परिवारले क्षतिपूर्ति माग गर्दै आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। गत जेठ ७ गते एचपी ग्यास पड्किँदा..
काठमाडौं । अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको ओल्र्याण्डोमा गएको आइतबार भएको आमनरसहांरस्थलको भ्रमणपछि राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रतिक्रिया आयो– डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाव प्रचार नीतिले देशमा उत्तेजना फैलाउने काम बढी गरेको छ। उनले भने, 'ट्रम्पको..
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पपछिको लगत सङ्कलन सुरु गर्न अझै एक हप्ता लाग्ने भएको छ । यही असार १ गतेदेखि लगत सङ्कलन सुरु गर्ने भनिए पनि बजेटको अभावमा सुरु गर्न नसकिएको..
काठमाडौँ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई वर्षाअगावै छानामुनि ल्याउन ८२ सामूहिक आवास निर्माण सुरु भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले ४६ र नेपाली सेनाले ३६..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अर्थशास्त्रीहरुले नबुझे पनि सर्वसाधारण जनताले बुझेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु भएको पेशागत महासंघको छैटौं..
काठमाडौ । पत्रकारहरुको अर्न्तराष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशल फेडरेशन अफ जर्नलिस्ट (आइएफजे) ले नयाँ निर्देशिकामार्फत् नेपाल सरकारले अनलाइन मिडियामाथि अंकुश लगाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न खोजेको भन्दै गहिरो चासो देखाएको छ। आइएफजेद्वारा शुक्रबार..
वीरगन्जबाट नौ नक्कली डाक्टर पक्राउ
पर्सा । नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको अभियोगमा आज वीरगन्जबाट नौ चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक फिरोज बस्नेतको नेतृत्वमा काठमाडाँैबाट आएको..
जनताको हत्या गरेको भन्दै प्रचण्डविरूद्ध कांग्रस सभापति देउवाले दिए उजुरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराले शान्ति समिति डडेल्धुरामार्फत..
अस्पताल पुगेर प्रचण्डले पूर्व मुमाबडामहारानीको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिए, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि छलफल
काठमाडौं । पूर्व मुमाबडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मीदेवी शाह शारीरिक अस्वस्थताका कारण अस्पताल भर्ना भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नर्भिक अस्पताल पुगेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। प्रचण्ड साँझ..
ओलीको सरकार गठनपछि क-कसले पाए राजनीतिक नियुक्ति, १०८ नियुक्तीमा अन्य साझेदारका १३ जना मात्रै
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आठ महिनामा ४२ जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । त्यसबाहेक ४७ सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी सरुवा र बढुवामा..
विश्व मै सबै भन्दा धरै हेलिकोप्टर खरिद गर्दै चीन, अमेरिकालाई चाँडै उछिन्ने
काठमाडौं । चीनले नागरिक प्रयोजनका लागि हेलिकोप्टर खरिदमा चाँडै अमेरिकालाई उछिन्ने एयर बसले जनाएको छ । चीनमा ४० प्रतिशतको हिस्सालाई आगामी सन् २०२० सम्ममा ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि एयरबसले..
घोषणा भएको चार दिन नबित्दै नयाँ शक्तिमा उग्र विवाद
काठमाडौं । चार दिनअघि तामझामका साथ घोषणा गरिएको नयाँ शक्ति नेपालभित्र विवादले चर्को रुप लिएको छ । पार्टी घोषणाको भोलिपल्ट राजधानीमा भएको पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेला तथा छलफल सत्रमा विवादले चर्को..
​नग्न तस्वीर धरौटीमा राखेर बैंकबाट ऋण !
बेइजिङ । विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको मुलुक चीनमा सर्वसाधारण नागरिकले सहज रुपमा ऋण प्राप्त गर्न नसकेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । सरकारी बैंकले ऋण प्रवाहमा कडाई गरेपछि केही निजी..
​घाँटीको सल मोटरसाइकलमा बेरिँदा ज्यान गयो
तम्घास । घाँटीमा लाइरहेको सल आफू सवार मोटरसाइकलमा बेरिँदा एक महिलाको ज्यान गएको छ। मङ्गलबार बेलुकी लु ४ प ७८२६ नंको मोटरसाइकलमा चढेर हस्तीचौरबाट सिर्सेनीतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा वस्तु-१, डुकुसीमा पुग्दा..
Results 1994: You are at page 46 of 67